Budgeting Cash ibasa remunhu wese - TMC App
Budgeting Cash ibasa remunhu wese
Hazvina mhosva kuti ndiwe ani, zvakakosha kuti uzive chaizvo kuti imarii yawakasiya kuti ugare uye kuzembera kubata maitiro ako ekushandisa.
Kune ani zvake uye munhu wese, heano mamwe mazano mukugadzirisa mari.
Mukuita bhajeti remari, zvakakosha kuti uwane kupinda mumitambo mikuru yemitengo. Kugadzira yako chaiyo yekufaira sisitimu yemarisiti, kuzivisa kwebhangi, ruzivo rwechikwereti kudoma zvinhu zvishoma zvinogona kukubatsira mubhajeti remari.
Gara uchironga zvakaipisisa zvavanogona kuuya chero nguva, chero nzvimbo. Kubhajeta mari kunoratidzawo kuchengetedza imwe mari parutivi yemutengo wenjodzi. Iwe uchave nehurongwa hwekudzokera kumashure kana mumwe wemumba akarwara kana mari yawaitarisira kugamuchira ikamiswa.
Dzivisa muedzo wekushandisa mari yakawanda. Imwe nyaya inokumisa kubva kubhajeti yemari ndeye propensity yekutenga nekukasira. Funga nezvemitengo inotanga mwedzi nemwedzi inoda kubhadharwa.
Shandisazve zvinhu zvekare kana kuti uzvitumire kumasangano anoyamura. Usasiye mwenje wakabatidzwa kana pasina ari kuishandisa. Mari yebhajeti inobatsirawo kuchengetedza nyika yakasvibira uye yakatsvinda.
Kutengesa uye kuderedzwa makuponi kwakakosha mubhajeti yemari. Tarisa uone kushambadza kwevhiki kubva kuzvitoro zvekwako uye nzvimbo yekutengesa. Zvinhu zvisingaparare zviri kutengeswa zvinogona kutengwa zvakawanda uye kuchengetwa mukombi yako.
Ichakubatsira mukugadzirisa mari kana uchikwanisa kuwana basa. Basa haringosanganisire kuwana mari yakawanda yekuti iwe ushandise kunze kwemari yaunotumirwa naamai vako nana baba, asi rinogona kukubatsira kuwedzera hunyanzvi hwako hwekuita kana wapedza kubva kukoreji.
Kune varidzi vemotokari:
Inogona kubatsira mukugadzirisa mari, kana ukaronga nzendo dzako dzakatenderedza dhorobha. Usati wabuda mumba funga nezve nzira yauchange uchitora kuitira kuti ushandise nzira, kudzivirira kuzara kwemotokari uye kuita zvinhu zvakakosha munzira (sekubhadhara mari, nezvimwewo). Inochengetedza gasi uye nguva.
Ongorora bhuku rekushandisa rako rekuchengetedza mota inodiwa. Routine tune ups uye kugadzirisa oiri kunobatsira kudzivirira kukuvadza kunodhura kumotokari yako mune ramangwana.
Kune vana (sei uye rini vanaamai nevabereki vanofanira kuvadzidzisa nezvekuita bhajeti).
Kuronga mari kunofanirwa kudzidziswa kuvana nekukurumidza sezvinobvira. Iwe unogona kutanga kuenderera mberi nekugadzirisa mari nguva dzose. Nemazano ako, unogona kuvadzidzisa asi sarudzo pabhajeti remari ndeyavo.
Zvakakosha kudzidzisa vana vako kuronga mari. Kuva muenzaniso wakanaka kwavari uye kuronga mari nokuchenjera, kana nzira yakanakisisa yaungavadzidzisa nayo.
Budget mari ndeyemunhu wese. Pasinei nezera, uremu, urefu kana ukuru, uye chimiro muhupenyu. Ungave uine makore matanhatu kana makumi matanhatu ezera, usina kuroora kana kuroorwa, murume kana mukadzi, kuita bhajeti ibasa remunhu wese.
Kubhajeta mari kunorevawo kuchengetedza imwe mari parutivi yekubhadharira mamiriro enjodzi. Zvichakubatsira mukugadzirisa mari kana ukakwanisa kuwana basa. Basa haringosanganisire kuita mari yakawanda yekuti uise mari kunze kwemari yaunotumirwa nevabereki vako, asi rinogona kukubatsira kuwedzera hunyanzvi hwako hwekuita kana wapedza kubva kukoreji. Zvakakosha kudzidzisa vana vako nezvebhajeti remari. Ungave uine makore matanhatu kana makumi matanhatu ekuzvarwa, usina kuroora kana kuroorwa, murume kana mukadzi, kuita bhajeti ibasa remunhu wese.
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraSpymaster proMaitiro ekuona chiitiko pane yako routerNu votNyika dzaunogona kushanyiraGhostctrl downloadGhostctrl apkAyiwwmqzBhjkwuyv